Caafimaad | Radio Himilo
Home / Caafimaad
Maxey muhiim u tahay xilligan inaan xiranno Af-saab?
Sadia Nour 13 days ago
Himilo – Waa dhif iyo naadir inaad wadooyinka, suuqyada, gawaarida dadweynaha, iyo goobabaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan ee Muqdishu aad ku aragtaa ruux wata Fuq-saab, sabab la xiriirta dadka ku nool gudaha dalka oo badankood aaminsan in feyruska ...
Sadia Nour May 25, 2022
Himilo – Hay’adda caafimaadka adduunka ee (WHO), ayaa digeysa in feyruska Monkeypox ee kiisaskiisa laga helay dalalka u badan reer yurub uu ku faafo dunida oo uu gaaro wadamo hadda ka nabdoon. Tan iyo 7-dii May, 131 kiis oo xanuunka ...
Ahmed Haaddi April 25, 2022
Himilo – Isbitaalka Sabuncoglu Sharif El-Din, oo xiriir la leh Jaamacadda Amasya ee Turkiga, ayaa dadka bukaanka ah ee ku jira baraya Qur’aanka kariimka inta lagu gudo jiro bisha barakeysan. Muuqaal laga soo duubay ayaa muujinaya bukaanada oo marka hore ...
Sadia Nour April 24, 2022
Himilo – Dad badan ayaa ka cawda calool xanuun marka la gaaro bisha barakeysan ee soon-qaad. Sida dhaqaatiirtu sheegaana xanuunka ayaa badanaa laga dareemaa qeybta sare ee caloosha. Waxa uu ka billawdaa hal bar isaga oo ku fida illaa dhabarka ...
Tartamada kubbadda cagta iyo bisha soon
Sadia Nour April 23, 2022
Himilo – Marka la gaaro bisha soon-qaad, magaalada Muqdisho waxaa kordha tartamada kubbadda cagta ee lagu qabto garoomada ciyaaraha ee degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana ka qeyb gala dhalinyaro u badan kuwa da’doodu ka wayn tahay 18-jir. Waxaa ka mid ah ...
Halista laga dhaxli karo cuntooyinka shiilan ee lagu afuro
Sadia Nour April 16, 2022
Himilo – Cuntooyinka sida aad ah looga isticmaalo guryaha soomaalida inta lagu guda jiro bisha barakeeysan ee soon, waxaa ka mid ah Sanbuuska, burka iyo kuwa kale ee lagu shiilo saliidda. Sameyntooda waxaa ku baxa qarash iyo waqti badan, iyada ...
Sadia Nour April 3, 2022
Himilo – Ramadaan oo ah bisha ugu qiimaha badan 12-ka billood ee ku dhigan taariikh-sheegaha Islaamka, waxaa ay dadka musliinta ah afka xirtaan inta u dhaxeysa waabarka illaa gabbal-dhaca. Inta badan dunida muslimka waxaa laga soomaa celcelis ahaan 12 saac, ...
Isbitaal ku yaalla Bangladesh oo loo doortay dhismaha ugu fiican dunida
Ahmed Haaddi February 19, 2022
Himilo – Isbitaal ku yaala degaan fog oo Bangladesh kamid ah ayaa loo magacaabay dhismaha dunida ugu fiican kadib qiimeyn uu ku sameeyey Machadka RIBA ee laga leeyahay dalka Britain. Isbitaalkan deegaan la-jaalka ah waxaa laga dhisay degmada Satkhira ee ...
Dhakhtar sameeyay in ka badan 37,000 oo qalliino bilaash ah
Himilo – Dhakhtar u dhashay dalka Hindiya oo ku takhasustay qalliinka balaastiigga ah ayaa lagu ammaanaa inuu yahay geesi aan koofiyad lahayn ka dib markii uu in badan oo noloshiisa ka mid ah ku qaatay samaynta in ka badan 37,000 ...